Amaphephadonga amahle kakhulu wezintaba we-Mac | Ngivela ku-mac
Amaphephadonga wentaba amahle kakhulu we-Mac
Lesi sithombe sizozwakala sijwayelekile kuwe. Lesi yisithombe sangemuva esikhethwe yi-Apple senguqulo ye-macOS Mojave. Kungumfanekiso omuhle walokho okusilindele kulesi sihloko lapho ungathola khona okuningi izintaba ezinhle wallpapers. Nakuba kuyiqiniso ukuthi lesi sithombe singesogwadule lwaseMojave nokuthi siyizindunduma, ngeke ungitshele ukuthi asikwazi ukumela kahle, ngoba singikhumbuza intaba. Ngithemba ukuthi uzokujabulela kakhulu okuqukethwe futhi ukhumbule ukuthi uma ufuna isithombe sangemuva esihle, uhlala unendatshana ezimbalwa ezedlule lapho ungathola khona 50 izizinda best noma ubalekele amanye ala mabhishi.
Singaqala ngezinye zezimali i-Apple bebelokhu besebenzisa amasistimu abo okusebenza. Abanye babo banezintaba njengabalingiswa. Okulandelayo sikushiyela leyo ebisetshenziselwa i-macOS El Capitan. Njengoba ungabona ngemuva lapho, nakuba i-protagonist ingeyona izintaba kuphela, singazazisa futhi sibona ubukhosi bazo. Ngesibhakabhaka esigcwele izinkanyezi, sikumema ukuthi uchithe ubusuku lapho ucabanga ngobukhulu bendalo futhi kusikhumbuza ukuthi sibancane kangakanani.
Enye inguqulo Apple eyisebenzisela isithombe sangemuva sayo macOS El Capitan Yilona esikushiya ngalo ngokulandelayo. Sihamba ubusuku nemini kodwa ngobuhle obufanayo. Lesi sikhathi sinesithombe sentaba ebonakala ingenakwenzeka ukukhuphuka ngenxa yokuma kwayo futhi lokho kunikeza iMac yethu ukuthinta kokungafi.Ngaleyo ntaba ebonakala ibusa yonke into futhi ebonakala inathi kusukela ekuqaleni kwezinsuku. Okungukuthi, uma ubungazi, ngicabanga kanjalo, i-El Capitan iyintaba etholakala epaki yemvelo yaseYosemite, elinye igama elikhethelwe enye yezinhlelo zokusebenza ze-Apple ozozithola ngezansi.
Bese sikushiyela isizinda esasetshenziswa i-Apple enguqulweni yayo macOS Sierra. Izintaba ezineqhwa nelanga lizishaya kancane. Ngiyazama ukwazi ukuthi ukuphuma kwelanga noma ukushona kwelanga. Ngibheja kokwakamuva, kodwa kunzima ukusho ngeshothi esondele kangaka. Lena igxile ezintabeni futhi ngikholelwa ngobuqotho ukuthi yimpumelelo ngokuphelele.
Okufanayo nomfowabo omncane, ngomqondo ongokomfanekiso, phansi i-MacOS High Sierra igxile nasezintabeni. Kodwa kulokhu sinesithombe esivuleke kakhudlwana, esihlanganisa izici eziningi kumephu. Sinechibi, izihlahla eziningi kanye nezintaba. Kubonakala sengathi iqhwa lokuqala eliqala ukuwela ekwindla kuleyo ndawo. Imibala engakholeki kulesi sithombe ejwayelekile yesizini enesithombe esikhulu kunazo zonke. Iphephadonga elifanele ukujatshulelwa njalo uma lifakwa ku-Mac.
Manje sesinayo inguqulo ye macOS Yosemite. Ukuhlonipha ipaki yemvelo esempumalanga yeSan Francisco, eCalifornia, e-United States. Yaqanjwa njengeNdawo Yamagugu Omhlaba yi-UNESCO ngo-1984 futhi yayiyipaki yokuqala eyahlelwa uhulumeni wobumbano wase-United States. Ngendlela, uma uthanda ukuthwebula izithombe uzokwazi ukuthi omunye wobaba bezithombe zesimanje, u-Ansel Adams, wathwebula leli paki izikhathi eziningi. Zifanele ukubona izithombe zakho. Empeleni ngizobashiya abambalwa kulo mbhalo ngoba nakuba bemnyama nokumhlophe, kodwa uzowabona amandla abanawo kanye neqiniso lawo. Azikho izinguquko zekhompiyutha, zikhula kuphela egumbini elimnyama elinekhono eliphelele kakhulu.
Yosemite ngu-Ansel Adams. Gcina ingqondo yakho ivulekile futhi ungacabangi ukuthi ukuba mnyama nokumhlophe akukuhle. Uzoyithanda inguqulo yakhe ye-El Capitan. Uma uhlaziya isithombe kahle, uzobona ukuthi ukusebenzisa ikhamera enobuchwepheshe obuncane kakhulu kunaleyo yamanje, ikwazile ukuthwebula zonke izibani nezithunzi zesigodi. Ngaphezu kwalokho, alikho nephikseli elilodwa lesithombe elingenalo ulwazi. Yonke into inemininingwane yayo, ngisho nesithunzi esijulile. Kuyamangaza ukubona isithombe.
Ngokunikezwa kwezithombe i-Apple esebenzise izintaba ezinhlelweni zayo zokusebenza, sizodlulela kokunye ukukhethwa kwamaphephadonga lokho singasebenzisa ama-Macs ethu.
Siqala ngesithombe sangemuva okuthi, nakuba singelona iqiniso, asisihle kangako futhi sizobukeka sisihle njengesithombe sangemuva sekhompyutha yethu. Zigcwele izintaba ezingabalingiswa balokhu okuthunyelwe kwebhulogi, sinakho konke okumele kuqoqwe isizinda esihle sedeskithophu. Ubuhle, amandla futhi ngaphezu kwazo zonke izikhala ukuze izithonjana zethu zezinhlelo noma amafayela esiwasebenzisa nsuku zonke zibonakale ngaphandle kwezinkinga. I-landscape leyo Ngifisa sengathi ngingabona njalo ekuseni uma uvula amehlo akho.
Ngesizinda esilandelayo noma isithombe se-Mac yakho, uzofuna ukusivala bese uthatha uhambo. Ingabe indawo emangalisayo nokuthi ngiyaqiniseka ukuthi uzosebenzisa ukuze ubone ukuthi ibukeka kanjani njengengemuva. Ngiyanitshela vele ukuthi ihlaba umxhwele futhi ingezinye ezikhethwe yimi, ikakhulukazi lezo zikhathi zonyaka lapho amaholide asondela. Kuyangikhuthaza ukuthi ngikwazi ukuba nomgomo wokuphuma ku-monotony futhi ngifune ukubheka okunye. Le ndawo iyangihambisa futhi ingiholela enjabulweni ephelele.
Bengilokhu ngizibuza ukuthi ngifake isithombe esilandelayo yini. Kodwa kufanele ngikwenze. Uma sinenguqulo yentaba i-El Capitan njengesizinda se-macOS futhi sinenguqulo ye-Ansel Adams enkulu, kungani singenayo inguqulo yentaba phakathi nobusika? Kufanele kubekwe, sibhekene nesithombe esisibonisa isigodi nabo bonke ubuhle baso kanye nobunzima benkathi yasebusika.
Amaphephadonga amabili alandelayo avela, mhlawumbe izintaba ezintathu ezidume kakhulu emhlabeni. Okungenani ezintathu ezidume kakhulu. Eyokuqala kubo iNtaba iFuji. Isiqongo esiphakeme kunazo zonke esiqhingini saseHonshu nakuyo yonke iJapan, enamamitha angama-3776 ukuphakama. Itholakala phakathi kwezifunda zase-Shizuoka ne-Yamanashi enkabeni ye-Japan kanye nasentshonalanga ye-Tokyo. Eyesibili ihambisana nentaba ephakeme kunazo zonke emhlabeni. I-Everest, enobude obungamamitha angu-8848, etholakala ezwenikazi lase-Asia, e-Himalayas, ikakhulukazi endaweni engaphansi kwentaba iMalangur Himal. Ekugcineni leyo kimina ingenye yezintaba ezinhle kakhulu ezikhona. Uphondo lwendaba. Itholakala ezintabeni ze-Alps, enqamula eSwitzerland nase-Italy. Isiqongo esikhulu, esicishe sibe yi-symmetrical pyramidal isiqongo saso singamamitha angu-4.478.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » eziningana » Amaphephadonga wentaba amahle kakhulu we-Mac
I-HomePod mini iyeza emazweni amaningi maduze
I-Dropbox iqala ukuhlola uhlelo lwayo oluhambisana ne-Apple Silicon